स्वास्थ्य – Janaubhar
Jan102021 by जनउभार संवाददाताNo Comments
इम्युन सिस्टम कमजोर छ, छैन यसरी थाहा पाउ
इम्युनिटी अर्थात् रोगप्रतिरोधक क्षमता भनेको शरीरको टक्सिनसँग लड्ने क्षमता हो । यो टक्सिन ब्याक्टेरिया, भाइरस, फंगस, प्यारासाइट र अन्य हानिकारक पदार्थ हुनसक्छ । हाम्रो इम्युनिटी बलियो छ भने रुघाखोकीबाट सजिलै बचाउँछ अनि हेपाटाइटिस, फोक्सोको संक्रमण, मिर्गौलाको संक्रमणलगायत अनेकौं रोगबाट बचाउँछ । हाम्रो वरिपरि कैयौं प्याथोजिनहरू हुन्छन् । हामीले थाहा नपाइकनै खाना र पानीका साथ, अझ सास लिँदा पनि,
यी हुन् दिमाग तेज बनाउने खाने कुरा
स्वस्थ जीवनका लागि मस्तिष्क स्वस्थ हुनु आवश्यक हुन्छ । दिमाग तेज बनाउनका लागि केही विशेष आहारहरूमा ध्यान दिनुपर्छ । उमेर बढ्दै जाँदा दिमागका कोशिकाहरू नष्ट हुँदै जान्छन र स्मरणशक्तिमा ह्रास आउँछ । तर ब्रेन फूड खानुभयो भने दिमागलाई शक्ति प्राप्त हुन्छ । यी हुन दिमाग तीखो बनाउने खानेकुराहरू – ओखर– दिनदिनै एक मुठी ओखर खानुभयो भने दिमागका नसाहरू तेज हुन्छन् । पालुंगो– पालुंगोमा भएको प्राकृतिक एन
Sep162019 by janaubharNo Comments
के हो डेंगु ? र कसरी बच्ने ?
पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट संक्रमण हुने भाइरल ज्वरोमध्ये एक डेंगु पनि हो । ज्वरो आउने, आँखा रातो हुने र दुख्ने, टाउको, पेट, जोर्नी र मांसपेशी दुख्ने, आलस्य हुनेजस्ता डेंगुका सुरुवाती लक्षणहरु हुन् । एक प्रकारको विषाणुबाट डेङ्गु भइसकेको व्यक्तिलाई अर्को प्रकारको विषाणु भएको लामखुट्टेले टोकेको अवस्थामा डेंगु घातक हुन्छ । अमेरिकास्थित सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन ९सीडीसी० को तथ्यपत्रअनुसार
खुसीका १० उपाय
१ हिँड्नु प्रत्येक दिन १० देखि ३० मिनेट हिँड्ने गर्नुपर्छ । हिँडाइले शरीरमा ताजापन दिन्छ । जसले मन शान्त हुन्छ । शरीर स्वस्थ रहन्छ । २ मौन रहनु दैनिक जीवनको भागदौडबाट १० मिनेट समय निकालेर मौन बस्नु शरीरका लागि फाइदाजनक हुन्छ । पलेटी कसेर आँखा चिम्म गरी १० मिनेर मौन बस्नु उत्तम । ३ प्रार्थना बिहानको हिँडाइपछि फर्किएर प्रार्थना गर्नु राम्रो । प्रार्थना गर्दै भगवान्लाई हिजोसम्मको साथ
Dec52018 by janaubharNo Comments
भाइरसको सक्रियता कुन समयमा बढी हुन्छ ?
प्रकाशित मितिः बुधबार, मंसिर १९, २०७५ |
मानिसलाई विरामी बनाउने भाइरस अन्य समयको तुलनामा बिहानको समयमा १० गुणाले सक्रिय हुने एक अध्ययनले देखाएको छ। भाइरसले विहान संक्रमण गरेमा अन्य समय भन्दा १० गुणा बढी सफल हुने युनिर्भसिटी अफ क्याम्ब्रिजको अध्ययनमा उल्लेख छ। शरिरको जैबिक घडीमा हुने असरले संक्रमणको जोखिम बढ्ने मुसामा गरिएको सो अध्ययनमा उल्लेख छ। अध्ययनले भाइरसको महामारी रोक्न एउटा नयाँ उपाय प्रदान गर्ने अनुसन्धानकर्ताहरुले विश्वास